एमालेको के कुरा ? सती जान यसलाइ के भो र ? कति पटक सती गइसक्यो । आइडिया चाही एमाले ले गजब गजब निकाल्छ। एक पटक राजाको कदमको बिरोध किष्ण मन्दिरमा घन्टी बजाएर गरेको थियो। तर ठोस कदम चाल्ने बेलामा चाही जिब्रो घुमाउदै जहिले पनि सति जान्छ।